November | 2012 | MYANMAR POLITICAL NEWS, ART AND IDEA
Lapadaung Rider November 29, 2012
Filed under: MY POEMS,PHOTOS,SATIRE,USDP — Nyo Gyi @ 3:12 pm
ဆီတွဲမီးလောင်၊ ငလျင်လှုပ်၊ မီးလောင်တိုက်အသွင်းခံရ ။
ဘာသာ သာသနာ အစော်ကားခံရ ။
(ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လုပ်ကြံခဲ့တာကလည်း ဒီပဲယင်း(စစ်ကိုင်းတိုင်း)မှာပဲ ဆိုတာ မမေ့စေချင်ဘူး။ ၈၈ တုန်းက လူအတော်များများ သေကြေပျက်စီးခဲ့ကြရတာလည်း စစ်ကိုင်းတိုင်းမှာပါပဲ)
(ကဲ … နောက်ထပ် ဘယ်သူ့ပုံ နဲ့ ဖန်တီးပေးတာ လိုချင်ကြသေးလဲ???)
Just foraJail … အဲလေ… Just foraJoke !
အစကတော့ ၄ ယောက်ပုံနဲ့ ၄ ပုံ ဖန်တီးမလို့ပဲ…။
ဒါက နံပတ် ၀မ်း ပေါ့။
တောင်းဆိုသူ အရမ်းများတဲ့သူကို ထပ်မံ ဖန်တီးပေးပါမည်။
(မှတ်ချက်။ ဒီကာတွန်းကို ကြည့်ပြီး Idea မြစ်ဖျားခံလာတာပါ။
5 years old Nyo Gyi (ငါးနှစ်သား ညိုကြီး) November 28, 2012
Filed under: INTRODUCTION MYSELF — Nyo Gyi @ 7:57 am
(November 26, 2012 is my blog’s 5th birthday!)
နိုဝင်ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၂ က ကျွန်တော် Blog စတင်ရေးဖြစ်ခြင်း ငါးနှစ်ပြည့်ပါ။
ငါးနှစ်ပြည့်မှာ တတိယအကြိမ်မြောက်အဖြစ် ကျွန်တော့် Blog ရဲ့  ခေါင်းစည်းစာတမ်းအချို့ နဲ့ ဓာတ်ပုံကို ပြောင်းပစ်မယ်လို့ စဉ်းစားထားပါတယ်။
သို့ … ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ(ငြိမ်း) November 17, 2012
Filed under: OTHERS' POEMS,USDP — Nyo Gyi @ 8:17 am
“သို့ … ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ(ငြိမ်း)”
ငြိမ်ပြီး ကြံနေတဲ့ သူ။
ဆူရင် လက်ဖက်ခြောက်ခတ်ဖို့ပဲ သိတယ်။
တရုတ်ကို ဖင်ပေးခဲ့တဲ့ ဒဏ်ရာ
သူတို့ ဘုန်းခဲ့တဲ့ ရွှေတွေ
ခင်ဗျားက သန်းခြောက်ဆယ်ထဲက လူတစ်ယောက်ထက်ပိုတဲ့
ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းလို ထုတ်ယူသုံးစွဲတော့ ခင်ဗျား
သဘာဝကပေးတဲ့ ကျိန်စာခံရတော့ ပြည်သူ
ဘင်္ဂါလီ မီးဟုန်းဟုန်းတောက်အောင်
မောင်ဖြူဆိုတဲ့ မဲမဲကြီးက မိန်းမရှစ်ယောက်
ဥပဒေရဲ့  ပြင်ပမှာ ဥပဒေမရှိ
ဥပဒေရဲ့  အတွင်းမှာလည်း ဥပဒေမရှိ
ကြောင်ကြီးက ကြွက်ကလေးကို စောင့်ရှောက်သတဲ့ဗျာ။
၂၀၀၈ ဖွဲစည်းပုံကို စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်
သေမှာကြောက်လို့ အရှင်ထွက် ထွက်သွား
ဒီတိုင်းပြည်ကလူငယ်တွေ ပညာရေး အဆင့်မမီတော့ဘူး
န.အ.ဖ GAME ကိုတီထွင်ပြီး အမုန်းဆွဲနေတော့တာ။
ဒီမိုကရေစီစစ်စစ်ကို ဥပဒေစစ်စစ်နဲ့မျှော်မိလို့ ။
သူ့ စကားက သေနတ်ပြောင်းတွေကောက်သွားတယ်
ခင်ဗျားသိခဲ့ရင် ။ ။
တိုးနှောင်မိုး၏ Facebook စာမျက်နှာ ~ https://www.facebook.com/toehnaung.moe
ထပ်မံ ကျူးလွန်ဖို့ ၀န်လေးမယ် မဟုတ်ပါဘူး November 14, 2012
Filed under: OTHERS' WRITINGS — Nyo Gyi @ 6:38 pm
“ထပ်မံ ကျူးလွန်ဖို့ ၀န်လေးမယ် မဟုတ်ပါဘူး”
ဆိုးသွမ်းသူတွေ ကိစ္စ အရင် ပြောပါရစေ။ ကားတစ်စီးကို ပြိုင်ကားလေးစီးနဲ့ လိုက်ပြီး ၀ိုင်းရိုက်တဲ့ အမှု၊ ခရီးသည်တင်ကားကို တားပြီး ကားပေါ်ပါတဲ့ ခရီးသည်တွေကို ၀ိုင်းရိုက်တယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စ၊ လူအင်အားစုဖွဲ့  ပြီး ရပ်ကွက်ထဲမှာ သောင်းကျန်းတယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စ စတဲ့ အမှုတွေဆိုတာ တရားစွဲလိုက်ရုံနဲ့ ပြီးတဲ့ အမှုမျိုးတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလို ဆိုးသွမ်းသောင်းကျန်းသူတွေကို ငြိမ်ဝပ်ပိပြားရေး ဥပဒေတွေအရပါ အရေးယူဖို့လိုပါတယ်။ နောက်ထပ် မဆိုးသွမ်းအောင် အာမခံမယ့်သူတွေနဲ့ ခံဝန်ချုပ် ပြုလုပ်စေသင့်ပါတယ်။ ဒါမှသာ နောက်ထပ် မဆိုးသွမ်းရဲမှာ၊ မဆိုးသွမ်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအတွက် လုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ သာမန် နာကျင်စေမှုလောက်နဲ့သာ အရေးယူတယ်ဆိုရင် ထပ်မံ ကျူးလွန်ဖို့ ၀န်လေးမယ် မဟုတ်ပါဘူး။
တစေ့တစောင်း ရဲလုပ်ငန်းအကြောင်း (၃၅) ဆောင်းပါး
မှုခင်းသတင်း ဂျာနယ်၊ အတွဲ (၁၇)၊ အမှတ် (၁)၊ ၁၄၊ ၁၁၊ ၂၀၁၂
ဒီမိုကရေစီ အရေခြုံထားတဲ့ အာဏာရှင်စနစ် November 10, 2012
Filed under: OTHERS' WRITINGS — Nyo Gyi @ 4:16 pm
“၁၉၆၂ ဥပဒေကိုလည်း မဖျက်သေးဘူး။ ပုဂ္ဂလိက သတင်းစာထုတ်ဖို့ကိုလည်း ဝေ့လည်ကြောင်ပတ် လုပ်နေတယ်။ ရုပ်မြင်သံကြားမှာလည်း ခရိုနီကုမ္ပဏီတွေကိုပဲ လက်ဝါးကြီးအုပ် လုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးထားတယ်။ အစိုးရမှာ Freedom of Press အတွက် အဖြေမရှိဘူး။ တစ်နည်းဆိုရင် ဒီမိုကရေစီအတွက် အာမခံချက် မပေးနိုင်သေးဘူး။
စင်ကာပူမှာလို မီဒီယာကို အစိုးရက ငွေကြေးအင်အား၊ ဥပဒေနဲ့ ထိန်းချုပ်ပြီး မိုနိုပိုလီလုပ်
ဖို့လုပ်နေ တယ်။ စင်ကာပူ၊ မလေးရှား၊ ကမ္ဘော ဒီးယားလိုမျိုး သတင်းမီဒီယာကိုထိန်း ချုပ်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ အစိုးရဟာ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ ဒီမိုကရေစီအစိုးရ မဖြစ်နိုင်ဘူး။
ဘီဘီစီနဲ့ အင်တာဗျူးမှာ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးက စည်းကမ်းပြည့်ဝတဲ့ ဒီမိုကရေစီလို့ သုံးနှုန်းခဲ့ပါတယ်။ ဒါရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာ ဒီမိုကရေစီ အရေခြုံထားတဲ့ အာဏာရှင်စနစ်ဆိုတာကော တာဝန်ရှိတဲ့ လူတွေ နားလည်သလားလို့ မေးချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ ကမ္ဘောဒီးယား၊ မလေးရှား၊ စင်ကာပူတို့လို တစ်ပါတီတည်းက အာဏာထိန်းချုပ် အတိုက်အခံကို အလုပ်ဖြစ်ရုံ အချိုသတ်ပေါင်း၊ သတင်းမီဒီယာကို လက်ဝါးကြီးအုပ်လုပ်ထားတဲ့ အရေခြုံဒီမိုကရေစီမျိုး မလိုလားဘူးဆိုတာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြောချင်ပါတယ်။”
ဒေါက်တာသန်းထွဋ်အောင် Eleven Media Group
ရန်ကုန်သွားမယ့် သူငယ်ချင်းသို့ အမှာပါးခြင်း November 6, 2012
Filed under: MY WRITING — Nyo Gyi @ 9:32 pm
“ရန်ကုန်သွားမယ့် သူငယ်ချင်းသို့ အမှာပါးခြင်း”
မျက်နှာမွဲ သူငယ်ချင်း၏ အသက်အန္တရာယ်ကို စိုးရိမ်စွာဖြင့်…
နန်းခင်ဇေယျာနှင့် ရေကူးဝတ်စုံ November 4, 2012
Filed under: OTHERS' NEWS — Nyo Gyi @ 4:36 pm
ညီမရဲ့  ပြိုင်ပွဲဝင် ဝတ်စုံအပေါ် အမြင် အမျိုးမျိုးနဲ့ ဝေဖန်ကြတဲ့ အပေါ် ညီမမှာ ပြောစရာ တစ်ခုခုများ ရှိမလား။
(မင်းရန်နိုင်, Hello စာပေအနုပညာဂျာနယ်, Vol 4, Issue 3, Tuesday, 30, Oct, 2012)
ညီမ ဒီမှာနေကတည်းက ဘီကနီပုံစံမျိုးနဲ့ လူရှေ့ မှာ မချွတ်ဖူးခဲ့ဘူးပေါ့နော်။ ဒါပေမဲ့ ဒီပွဲကို ပြိုင်ရမယ်ဆိုကတည်းက ရေကူးဝတ်စုံနဲ့ ပြိုင်ရမယ်ဆိုတာ သိခဲ့တယ်။ အဲဒီမှာ ညီမ နည်းနည်းလုံမယ့် ရေကူးဝတ်စုံကို စဉ်းစားခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ပြိုင်ပွဲစည်းမျဉ်းထဲမှာ အရှက်လုံရုံ အပေါ်တစ်ထည် အောက်တစ်ထည်နဲ့ ပြိုင်ရမယ်ဆိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း ဒါက ရောင်းတာမဟုတ်ဘူးလေ။ အဲတော့ ညီမမှာ ရေကူးဝတ်စုံအတွက် တော်တော်ရှာပြီး ဗီယက်နမ်မှာ ဝယ်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်။ အဲဒါနဲ့ ပြိုင်ခဲ့ရတယ်။ ပြိုင်ပွဲမှာ ၃ ရက်ရောက်ပြီး ၄ ရက်မြောက်မှာ ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ရတယ်။ ကင်မရာချိန်တဲ့အချိန်မှာ တစ်ခါမှလည်း မဝတ်ဖူးဘူး။ ဒီလို ပုံစံနဲ့လဲ မရိုက်ခဲ့ဖူးတော့ ယုံကြည်မှုမရှိဘူးပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ဒါပြိုင်ပွဲဝင်နေတာပါလား ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ ငါမဟုတ်တာ လုပ်တာမဟုတ်ဘူး။ လူတိုင်းဝတ်ရတာဆိုတဲ့ ခံယူချက်နဲ့ ညီမ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် တက်တက်ကြွကြွနဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ရတယ်။